Real Madrid Oo Guul Dirqi Ah Oo Ay Ka Gaadhay Granada Ugu Sii Dhowaatay Koobka Oo Ay Khamiista Ugu Guuleysan Karto Laba Fursadood - Gool24.Net
Real Madrid Oo Guul Dirqi Ah Oo Ay Ka Gaadhay Granada Ugu Sii Dhowaatay Koobka Oo Ay Khamiista Ugu Guuleysan Karto Laba Fursadood
Real Madrid ayaa hore ugu ruqaansatay hanashada horyaalka waddanka Spain ee LaLiga, waxaana guul ay ku dhibaatootay oo ay ka gaadhay Granada ay laba dhibcood ugu jirsatay koobka oo ay Khamiista ku guuleysan doonto haddii ay ka badiyaan Villarreal ama la qabto Barcelona oo Osassuna la ciyaari doonta.
Real Madrid ayaa laba gool oo ay lix daqiiqadood oo kali ahi u dhexeeyeen hoggaanka ugu qabatay ciyaarta ay martida ugu ahaayeen Granada, laakiin qaybtii dambe ayaa culays weyn la saaray oo gool laga dhaliyey, kuwo badan oo kalena ay halis u galeen in laga dhaliyo.
Mendy ayaa daqiiqaddii 10aad ee ciyaarta goolka koowaad u dhaliyey Real Madrid, waxaana labaad raaciyey Karim Benzema oo daqiiqaddii 16aad shabaqa taabtay ka hor intii aanay Granada goolka madiga ah ku hubsaan shabaqa Real bilowga qaybta dambe.
Real Madrid waxay yeelatay 83 dhibcood xilli ay laba ciyaarood ka hadhsan yihiin horyaalka, waxaanay afar dhibcood ka horreysaa Barcelona oo 79 dhibcood haysata.
Kaydka: Mario Rodriguez, Antonin, Pepe Sanchez, Yan Eteki, Joao Costa, Ismail Koybasi, Roberto Soldado, Angel Montoro, Antonio Puertas, Carlos Neva, Aaron Escandell.
Kaydka: Miguel Gutierrez, Rodrygo, Diego Altube, Marco Asensio, Javi Hernandez, Gareth Bale, Eder Militao, Alphonse Areola, Lucas Vazquez, Vinicius Junior, Brahim Díaz, Eden Hazard.
Zinedine Zidane oo maanka ku hayay in kooxdiisu u baahan tahay saddexda dhibcood si ay ciyaarta dambe ugu dabbaal-degto hanashada horyaalka haddii ay ka guuleysato Villarreal ayaa sameeyey shax beddel badan, waxaanu awoodda saaray khadka dhexe isaga oo yareeyey weerarka.
Los Blancos ayaa awoodda sare ee ciyaarta yeelatay qaybtii hore, waxaana kubbad isku-dhiib ah samaynayay Isco, Modric iyo Kroos, waxayse dhibaatadu ka jirtay afka hore oo uu Karim Benzema kali ku ahaa.
Daqiiqaddii 10aad ee ciyaarta ayay Real Madrid hoggaanka ciyaarta qabatay, waxaana gool qurux badan u dhaliyey difaaca bidix ee Ferland Mendy oo kubbad uu kalidii lasoo galay xerada ganaaxa laag awood badan ku dhex dhigay shabaqa.
Casemiro ayaa kubaddan ugu dhiibay Mendy bannaanka xerada ganaaxa, waxaana xilli ay ciyaartoyda Granada ku mashquulsanaayeen raacista laacibiinta kale ee Real Madrid uu Mendy helay fursad uu hore ugu socon karo, kaddibna goolka ku toogan karo.
Daqiiqaddii 16aad ayay Real Madrid ciyaarta ka dhigtay 2-0, waxaana kubbad ay khadka dhexe iskugu dhiibeen Isco iyo Modric garabka bidix loogu tuuray Karim Benzema oo isaguna kusoo eryaday difaaca, isla markii uu soo galay xerada ganaaxana si farsamaysan ugu gooyey difaacii hortaagnaa ka hor intii aanu dhinaca kale ee goolka toogan, isla markaana shabaqa ku ruxin.
Goolkan uu Benzema dhaliyey ayaa ahaa kii 12aad ee uu ka dhaliyey Granada 14 ciyaarood oo uu ka hor yimid tan iyo sannadkii 2009 oo uu Real Madrid kaga soo biiray kooxda reer France ee Lyon.
Qaybta hore ayay Real Madrid awood badan lahayd, waxaanu lagu kala nastay 2-0, laakiin markii lagu soo laabtay qaybta dambe ayay Granada noqotay koox gebi ahaanba ka beddelin sidii hore, waxaanay lasoo galeen dardar dawakhisay difaaca Real.
Khadka dhexe ayay Granada gacanta ku dhigtay, sidoo kalena weerar orod badan oo rogaal-celis ah ayay samaynaysay, waxaanay ugu dambayntii heshay gool uu u dhaliyey Darwin Machis.
Casemiro ayaa goolkan dembigiisa lahaa oo kubadda laga soo qaatay, wax fursad ahna lama siinin Dani Carvajal oo weerar ku maqnaa oo dhinaciisa laga soo galay iyo Raphael Varane oo xakamayn kari waayey Machis.
Kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa goolkiisa kasoo qabtay kubbad sii gelaysa taas oo nasiib wanaag timid xilli uu isagu sii dhex-taagnaa oo uu garab siinayay goolhaye Courtois, laakiin waxa jirtay khataro waaweyn oo kale oo ay Real Madrid gashay dhamaadkii ciyaarta.
Ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay 1-2 ay guushu ku raacday Real Madrid oo usii dhowaatay hanashada horyaalka waddanka Spain ee LaLiga oo ay qaadi doonto Khamiista haddii ay ka badiso Villarreal ama la qabto Barcelona oo Osasuna la ciyaaraysa isla habeenkaas.